Bisadaha waxay leeyihiin 7 qof - Sababta hadalkan | Bezzia
Waa maxay sababta bisadaha had iyo jeer loo sheego inay leeyihiin 7 nolol? Waxaa laga yaabaa inaad tahay faahfaahintan laakiin waxaad la yaabi doontaa sababta odhaah noocaas ah. Hagaag, maanta waa markii la awoodi lahaa in la xalliyo shakiyada naga sugaya. Maadaama ay had iyo jeer yihiin waxyaabo xiiso leh oo lagu xisaabtamayo iyo haddii aad la nooshahay hal ama in ka badan bisadaha, waxaad noqon doontaa xitaa xiiso badan inaad ogaato jawaabta.
Bisadaha ayaa had iyo jeer lala xiriiriyay waxyaabo togan taariikhda oo dhan. Waxaa laga yaabaa in taasi tahay sababta ay had iyo jeer u jiraan waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku wareegsan. Sidaa darteed, la yaab ma leh in aan sidoo kale ka hadalno toddobadaas nololood ee aan aad u xusno markaan ka fikirno. Ogow!
1 kartidaada jireed
2 Halyeeyadii qarniyadii dhexe
3 lambarka sixirka
Bisadaha ayaa la sheegay in ay leeyihiin 7 nolol sababtoo ah awooddooda jireed. Taas macnaheedu waa, tani kama dhigi doonto inay ka xoroobaan wax kasta oo cudur ah, laakiin sababtoo ah awooddooda jireed, waxay ka dhici karaan meel sare iyaga oo aan waxyeello gaarin. Arrintaas aan had iyo jeer maqalno bisadaha cagahooda ku soo degaya waxay la mid yihiin wixii aan soo sheegnay. Ma aha in ay dhab ahaantii cagahooda ku soo degaan, laakiin marka ay dhacaan si fudud uma dhaawacmaan sida noocyada kale. Marka laga soo tago in miisaankiisu fudud yahay, waa in la xuso taas waxay leeyihiin lafdhabarta ugu dabacsan iyo dheelitirnaan weyn. Markay dhacaan, waxay samayn doonaan nooc ka mid ah dhabarka dhabarka, taas oo ka dhigaysa mid u shaqaynaysa sida baarashuud. Hadda waxaan fahamsanahay wax yar oo ku saabsan ku degista cagahaaga iyo adigoon dhaawacmin.
Halyeeyadii qarniyadii dhexe
Waa run in bisadaha ay had iyo jeer ku lug lahaayeen dhammaan noocyada halyeeyada. Laakin Intii qarniyadii dhexe oo dhan waxay had iyo jeer ahaayeen qayb ka mid ah sixirka. In kasta oo aanay doonayn, haddana mar walba waxa ay qaraabo ahaayeen in ay isu soo dhawaadaan, sidoo kalena ay ku hareeraysan yihiin saaxiriinta ama saaxiriinta. Waxaa laga yaabaa in si fudud ay ugu wacan tahay macnaha xiisaha leh ee iyaga. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in inkasta oo ay la kulmeen cadaadis ay had iyo jeer joogaan. Markaa halkaas ayaa laga qaatay fikradda ah inay sixir noqon karaan. Tan iyo markii sixiroolayaasha la qabtay, xayawaanku sidoo kale waxay la kulmeen dhibaato la mid ah. Laakiin maadaama aysan dadka oo dhan isku mid ahayn, waxaa jiray dad badan oo soo dhaweeyay.
Inta aan kor ku soo xusnay ka sokow, nambarka 7 ayaa lagu daray, wax kasta oo ka sii badan, maxaa yeelay, iyaga waxaa lagu tirin jiray xayawaan ka badan xurmada, wax la mid ah in lagu xiro tiro sidoo kale ah sixir. Haa, haddii ay dhacdo inaadan garanayn waa lambarka 7 ee soo jiidanaya nasiib wacan. Marka laga soo tago in had iyo jeer lala xiriiriyo sixirka. Sidaa darteed, midowga tan xayawaanka. Laakin ka digtoonow, sababtoo ah wadamada qaarkood looma tixgaliyo in ay 7 nool yihiin. Waddamada Anglo-Saxon waxaa la sheegaa in ay leedahay 9, sababtoo ah waxay calaamad u tahay taariikhda Ilaah Ra. kaas oo qaab bisad u socdaalay oo nafta ka qaatay ilaahyada oo dhan. Halka Turkiga, bisadaha ay haystaan ​​hal nolol ka yar. Markaa, tani waxay ku xirnaan doontaa caqiidada meel kasta.
Waxaan horay u aragnaa in bisadaha ay had iyo jeer ku xiran yihiin adduunyada sixirka iyo halyeeyada iyo sheekooyinka ugu fantassan. Sababtan awgeed, dhaqanka Masaarida dib-u-dhalashada xayawaanka ayaa sidoo kale loo maleynayay. Markaa sidaas bisadaha waxay ku noqon doonaan qaabka aadanaha ka dib markay gaaraan reincarnation toddobaad. Markaa, ogaanshaha waxaas oo dhan, way fududahay in la fahmo sababta bisadaha u leeyihiin 7 nolol. Dabcan, waxaas oo dhan waa laga tagay oo runtii waxay leeyihiin hal nolol oo keliya. Mid ay tahay inaan daryeelno oo aan siino wax walba oo wanaagsan si ay ugu raaxaystaan ​​​​si buuxda. Markaa, xasuusnoow in tillaabooyin ammaanku ay mar walba ku jiraan gurigaaga. Yaynaan duufsan qaddarka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Mascotas » Maxay yiraahdeen bisadaha waxay leeyihiin 7 nolol?
Pez, Naguisa ururinta kabaha cusub ee SS22